Fanehoan-javatra mitohy sy tsy mitohy - Wikipedia
Ny fanehoan-javatra mitohy dia fanehoan-javatra manondro ny fivoaran' ny asa na ny toetra fa tsy ny fahavitany ka isan' ny fanehoan-javatra tsy efa izy. Ny fanehoan-javatra tsy mitohy kosa dia tsy manondro izany ka afaka maneho ny fahavitany sady isan' ny fanehoan-javatra efa.
Amin' ny fiteny anglisy, ny fehezanteny hoe He is washing ("Manasa izy") dia ahitana matoanteny amin' ny fanehoan-javatra mitohy izay atao hoe koa fanehoan-javatra mivoatra. Toraka izany koa ny matoanteny ao amin' ny fehezanteny frantsay hoe Nous étions en train de manger ("Misakafo isika/izahay (izao)"). Ny matoanteny amin' ny filazam-potoana lasa tsy efa (frantsay: imparfait de l'indicatif) ao amin' ny fehezanteny frantsay hoe Nous mangions ("Nisakafo isika/izahay (tamin'izay)") na Nous étions en train de manger ("Teo am-pisakafoanana isika/izahay") dia amin' ny fanehoan-javatra mitohy na mivoatra koa.
Fanehoan-javatra tsy mitohyHanova
Amin' ny fiteny anglisy, ny fehezanteny hoe He washes ("Manasa izy") dia ahitana matoanteny amin' ny fanehoan-javatra tsy mitohy izay atao hoe koa fanehoan-javatra tsy mivoatra. Ny matoan-teny amin' ny filazam-potoana lasa tsotra ao amin' ny teny frantsay (passé simple) hoe Nous mangeâmes ("Nisakafo isika/izahay") sy ao amin' ny fiteny anglisy (simple past na preterit) hoe We washed ("Nanasa isika/izahay") dia manondro koa ny fanehoan-javatra tsy mitohy na tsy mivoatra. Isan' ny fanehoan-javatra efa izany ny fanehoan-javatra tsy mitohy na tsy mivoatra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanehoan-javatra_mitohy_sy_tsy_mitohy&oldid=999171"
Dernière modification le 20 Desambra 2020, à 08:32
Voaova farany tamin'ny 20 Desambra 2020 amin'ny 08:32 ity pejy ity.